Cudurka Coronavirus Oo Faraha Ka Sii Baxaya & Dhimashada Oo Sii Kordheysa (Sawirro) | Caroog News
Cudurka Coronavirus Oo Faraha Ka Sii Baxaya & Dhimashada Oo Sii Kordheysa (Sawirro)
Cudurka Coronavirus ee ka dillaacay dalka Shiinaha ayaa faraha kasii baxaya, ayada oo dhimasha ay gaartay 563 qof, halka kumanaan kale ay la il-daran yihiin, duniduna ay ka argagaxsan tahay.
In ka badan 28,000 qof ayuu cudurka illaa iyo hadda ku saameeyey dalka Shiinaha, ayada oo mas’uuliyiinta ay la xarbinayaan inay xakameeyaan fiditaankiisa, xitaa haddii ay malaayiin qof ku qasbeen inaysan guryahooda kasoo bixin.
In ka badan 20 dal ayaa xaqiijiyey inay heleen kiisaska cudurkan kuu dhaca habdhiska neefsashada ee dabayaaqadii sanadkii tegay kasoo shaac baxay gobolka Wuhan ee Shiinaha.
Dhinaca kale kumanaan qof oo saaran maraakiib dalxiis oo ku kala sugan xeebaha Hong Kong iyo Japan ayaa wajahaya sugitaan walaac leh oo ku saabsan haddii cudurkan uu saameeyey iyo in kale.
Ugu yaraan labaatan qof oo saaran markabka Diamond Princess ayaa illaa iyo hadda laga helay cudurka, taasi oo qasabtay in 3,700 oo qof oo markabka saaran, islamarkaana kasoo kala jeeda 50 dal, lagu celiyo markabkan oo yaalla xeebta Yakohoma ee Japan.
Sidoo kale, 3,600 oo qof oo saaran markabka World Dreams ee yaalla xeebta Hong Kong, ayaa la marinayaa tijaabo caafimaad, kadib markii saddex qof oo horey markabka usoo raacay laga helay cudurka.
Cudurkan ayaa lagu macneeyey xaalad deg deg oo caalami ah, taasi oo ku qasabtay dalal badan inay muwaadiniinta uga digaan inay tagaan Shiinaha, halka qaarkoodna ay mamnuuceen dadka ka imanaya dalkaas.